တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး - intouchmedicare
“ရောဂါမရှိခြင်းသည် ကြီးကျယ်သော ကံကြမ္မာ” ဟူသော စကားသည် အမြဲမှန်နေပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောဂါဘေးကင်းရန်ကာကွယ်ဖို့ အရေးကြီးပါသည် အထူးသဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပိုးမွှားများနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ပြည့်နှက်နေပြီး အရေးကြီးသော အကူအညီမှာ ရောဂါကို အချိန်မီ အပြီးသတ် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အရေးကြီးပါသည်။ အသက်အရွယ်မရွေး အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ကာကွယ်ဆေးများစွာသည် အခြားကာကွယ်ဆေးများဖြသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ရောဂါ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။ ကာကွယ်ဆေးများ၏ အရေးပါပုံကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ကာကွယ်ဆေး (Vaccine) ဆိုတာဘာလဲ?
ကာကွယ်ဆေးများသည် တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ရောဂါပိုးမွှားများကို ခုခံနိုင်စွမ်းတည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထိုးသွင်းထားသော အရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ထိုရောဂါကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ရောဂါလက္ခဏာများ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကို လျှော့ချပေးစေနိုင်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ရောဂါအမျိုးမျိုး၏ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တိုးစေသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရောဂါလက္ခဏာများကို လျှော့ချပေးစေနိုင်ပါသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ Bရောဂါ ၊ HPV ကူးစက်မှုရောဂါမှ ပြင်းထန်သေကင်ဆာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးသည်။
၎င်းသည် တစ်ဦးချင်းနှင့် နိုင်ငံအဆင့်တွင် ဆေးကုသစရိတ်များကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။
Intouch Medicare ဆေးခန်း လူကြီးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အဆင်သင့်ရှိပါသည်။
Intouch Medicare ဆေးခန်းလူကြီးနှင့် သင့်ချစ်ခင်ရသူများအတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန် တစ်နေရာတည်းတွင် လူကြီးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဆေးခန်းမှာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါသည်။
1. တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ၎င်းကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်သောလူများအဖွဲ့
2. အသည်းရောင်ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး (Hepatitis B vaccine)
3. ဆုံဆို့နာ ကာကွယ်ဆေး - မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး DT
ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ပိုးမွှားများကို တိုက်ဖျက်ရန် ခိုင်ခံ့သောအကာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသော ပြင်းထန်သောရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေသည်။ နာတာရှည်ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၎င်းသည် ဘဝနှင့် အလုံးစုံကျန်းမာရေးအပေါ် ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ လိုအပ်သူများအတွက် Intouch Medicare Clinic တွင် သင့်အတွက် သင့်လျော်မည့် ကာကွယ်ဆေးကို မေးမြန်းရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် သင့်လျော်သော ကာကွယ်ဆေးကို ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။